Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Graphite | Shiinaha Graphite Rotor Factory
Qiiqa qiiqa u adkeysiga uumiga ah
Rotor garaafku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: rotor rod iyo biiyaha. Nidaamka gudbinta wuxuu kaxeeyaa rotor-ka garaafka inuu wareego, argon ama nitrogen waxaa lagu afuufa birta dhalaalay iyada oo loo marayo rotor rotorka iyo sanka.
Rotor garaafku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: rotor rod iyo biiyaha. Nidaamka gudbinta wuxuu kaxeeyaa rotor-ka garaafka inuu wareego, argon ama nitrogen waxaa lagu afuufa birta dhalaalay iyada oo loo marayo rotor rotorka iyo sanka. Xawaaraha sare ee rooti-roorayaasha garaafku wuxuu kala firdhiyaa argon ama nitrogen galaya dhalaalka birta si uu u sameeyo xumbo badan oo yar yar, taasoo ka dhigaysa inay ku kala dareeraan biraha dareeraha ah Isla mar ahaantaana, rotor-ka wareegaya wuxuu sidoo kale dhiirrigeliyaa faafitaanka hydrogen iyo ka-mid noqoshada biraha dhalaalaya, taasoo ka dhigaysa inay la xiriirto goobooyin. Dhalaalida, goobooyinku waxay soo nuugaan hydrogen-ka ku jira dhalaalka, waxay soo nuugaan waxyaabaha ku jira oksaydhka, waxaana laga saaraa dusha dhalaalaya sida ay xummaddu u soo baxayso, si dhalaalka loo daahiriyo
Graphite ul wareegsan
Qalabka loo yaqaan 'Graphite rotor' waa qayb ku habboon bamka hawada xilligan la joogo, iyo waxqabadka saliiddeedu wanaagsan tahay ayaa aad uga wanaagsan tan saliidda caadiga ah. Graphite waa sheyga ilaalinta deegaanka, rotor graphite wuxuu iska ilaalin karaa wasakheynta alaabada la farsameeyay.
Oxidation rotor graphite adkaysi u degassing biyaha aluminium